Sawirka Yaasiin Farey iyo Ra'iisul Wasaare ROOBLE ee hadal-haynta badan abuuray - Caasimada Online
Home Warar Sawirka Yaasiin Farey iyo Ra’iisul Wasaare ROOBLE ee hadal-haynta badan abuuray
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa tan iyo xalay aad looga hadal hayay baraha bulshada sawiirada taliyaha hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud oo loo yaqaanno Yaasiin Fareey iyo ra’iisal wasaaraha dowladda Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble.
Rooble ayaa xalay booqday oo shacab kula kulmay hotelka Jazeera ee Muqdisho, waxaana wehliyey xildhibaano, wasiiro iyo saraakiil uu ka mid yahay Yaasiin Farey oo ah taliyaha NISA.
Sawirkan ayaa hadal haynta badan u abuuray laba arrin dartood, oo mid ay tahay kiiska Ikraan Tahliil, halka midka labaadna uu yahay digniintii NISA ee aheyd in Al-Shabaab ay beegsaneyso madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Rooble.
Middka koowaad: Khilaaf ka dhashay kiiska Ikraan Tahaliil ayaa la aaminsanyahay in labada mas’uul uu ka dhxeeyay kaas oo cirka isku shareeray.
Ikraan Tahaliil oo ahayd gabadh ka tirsan Hay’adda Sirdonka iyo Nabad Sugidda ee Soomaaliya (NISA) ayaa la sheegay inay dileen NISA.
Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, ayaa xilligaas soo saaray warqad uu shaqada uga joojiyay madaxii hay’adda NISA Fahad Yaasiin.
Dhanka kale madaxweyne Farmaajo ayaa si kumeelgaar ah xilkii uu banneeyay Fahad ugu magacaabay Gaashaanle Sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud, oo xilligaas ahaa Taliyaha Nabad Sugidda ee Gobolka Banaadir.
Midda labaad: NISA ayaa dhowaan ka digtay in Al-Shabaab ay beegsaneyso madaxda qaranka, sida Farmaajo iyo Rooble, balse mucaaradka ayaa u fasiray inay tahay in NISA ay beegsaneyso Rooble.
Rooble ayaa la sheegay in markii xalay lagu arkay la weydiiyey “miyaadan ka cabsaneyn Maxamed Maahir?” oo ah ninka ay NISA sheegtay inuu mas’uul ka yahay howlgalka lagu beegsanayo. Rooble ayaa markaas intuu qoslay ku yiri “Maahir iyo ninkii sheegayba waa wadaa.”